Muqdisho: Heshiis laga gaaray shirkii wada-tashiga doorashada
Madaxweynaha dawladda federaalka, iyo shanta madaxweyne ee maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa ku heshiiyey in qodobo cusub oo la xiriira doorashada la filayo in Soomaaliya lagu qabto.
Madaxda ayaa ku heshiiyey in dawladda federaalka ay magacawdo guddo doorasho oo heer federal ah, halka madaxda maamul goboleedyadu ka magacaabayaan guddi doorasho oo heer gobol ah, waxaana labada guddi ay ka wada shaqayn doonaan maamulka doorashooyinka.
Madaxda ayaa sidoo kale ku heshiiyey in ergooyinka soo dooranaya xildhibana kasta ay ahaadaan 101 halka heshiiskii hore ee Dhuusamareeb uu ka ahaa 301 ergo.
Waxaa kale oo ay ku heshiiyeen in doorashooyinka lagu qabto laba magaalo oo ka tirsan maamul goboleed kasta, halkii ay horey uga ahayd 4 goobood.
Waxay sidoo kale u heshiiyeen inaan qorshaha doorashadu uu bilowdo 1-da bisha Noofambr ee soo socota.
Qodobada heshiiska oo buxa ayaa sidan u qoran:
Heshiiskan siyaasadeed waxaa loo gudbinayaa Baarlamaanka Federaalka si ay u meel mariyaa.